8 calaamadood oo caabuqa kaadi mareenka. – Noor Health Life
8 calaamadood oo caabuqa kaadi mareenka.
Caabuqa kaadi mareenka waa cudur aad u xanuun badan oo dad badan ay ka warwareegaan inay ka hadlaan.
Laakiin ma ogtahay in calaamadaha caabuqan ama UTI ay aad u cad yihiin oo inta badan la aqoonsan karo xitaa ka hor bilawga cudurka?
Noor Health Life waxay leedahay calaamadaha caabuqan waa kuwo muuqda laakiin dadka intooda badan way iska indhatiraan.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ogaato cudurka kaadi mareenka, waa inaad xasuusataa calaamadahan.
Caabuqa kaadi mareenka waa sahlan tahay in laga fogaado
Ku dadaal inaad kaadido mar kasta
Tani waa calaamad caadi ah oo UTI ah oo aad dareento inaad jeceshahay inaad kaadido mar kasta, xitaa haddii aad hadda ka soo baxday qolka dhaqida, waxaa laga yaabaa inaad dareento xaalad degdeg ah oo ku saabsan arrintan sida degdegga ah.
Kaadida aad u yar
Marka aad tagto qolka musqusha, marar dhif ah ayaad kaadineysaa, waxaad dareemeysaa inaad wax badan qabato laakiin ma awoodid inaad sameyso dadaal kasta ama kuma qanacsanid.
Inaad aado qolka musqusha inta lagu jiro xanuunkan waxay kugu keeni kartaa xanaaq, waxaa laga yaabaa inaad dareento in shaqadani ay tahay mid aad u xanuun badan, waxaa u dheer in uu jiro xanuun, labada xaaladoodba waxay calaamad u tahay xanuunka.
UTIs badanaa waxay sababaan dhiig kaadida, laakiin qasab maaha in qof walba ku dhaco, sababtoo ah waxay noqon kartaa arag hurdo.
Urta kaadidu aad bay u xun tahay nooc kasta oo caabuqa kaadi haysta, haddii aad sidoo kale isku aragto mid ka mid ah calaamadaha kor ku xusan oo leh ur xun, waxay noqon kartaa UTI.
Sababaha caadiga ah ee caabuqa kaadi mareenka
Midabka kaadida ayaa wax badan sheegi kara, oo ay ku jiraan caabuqa kaadi mareenka. Haddii midabkani yahay wax aan ahayn jaalle ama hufan, waa calaamad walaac. Casaan ama bunni waa calaamad caabuq, laakiin marka hore iska hubi inaadan cunin wax cunto ah oo casaan, oranji ama casaan ah.
Daal aad u daran
Caabuqa kaadi mareenka waxa sababa infekshanka kaadiheysta, si kastaba ha ahaatee, natiijada caabuqa, marka jirku ogaado in ay wax khaldan yihiin, wuxuu bilaabaa inuu bararo. taasoo keentay dareen daal.
Qandhada, oo ay ka mid yihiin calaamadaha kale, waxay badanaa muujinayaan korodhka darnaanta caabuqa kaadi mareenka iyo faafidda caabuqa ee kelyaha. Haddii aad leedahay qandho ka badan 101 Fahrenheit ama aad dareento qabow ama jidhkaaga uu ku maro dhididka markaad seexanayso habeenkii, waa inaad si degdeg ah u raadsato gargaar caafimaad.
Waxa kale oo jira khatar ah in kelyaha caabuqa ay sababto caabuqan ama caabuqa oo astaamihiisa sida caadiga ah ay ka muuqdaan qaab gubasho daran iyo xanuunka kaadida, halka rabitaanka joogtada ah ee kaadida, midabka midabka, waxaana dhici karta qandho, taas oo kor u kacda. xaalado halis ah.
Dhiigbaxa iyo kaadida ur xun ayaa sidoo kale ah calaamado.
Haddii aan la daweyn ama aan la ogaanin, cudurku wuxuu ku faafi karaa kaadiheysta una gudbi karaa kelyaha wuxuuna sababaa caabuq kelyaha ah, taas oo keeni karta dhimasho.
Dhanka kale, waxaa jira sababo ay adag tahay in la xakameeyo, sida gabowga, haweenka ayaa uga khatar badan ragga, uurka, dhagxaanta kelyaha, macaanka iyo cudurka Alzheimers iwm.
Laakiin waxa kale oo jira qaar ka mid ah caadooyinka qaab nololeedka kuwaas oo kordhiya khatarta cudurka.
Ha ka taxadarin nadaafadda
Dhab ahaantii, nadaafad-xumada waxay keeni kartaa inay bataan tirada bakteeriyadan, taas oo kordhinaysa khatarta caabuqa kaadi-mareenka.
Cab biyo yar
Daraasad ay samaysay Noor Health Life ayaa lagu ogaaday in caadada cabbitaanka biyaha badan ay hoos u dhigto khatarta caabuqa kaadi mareenka gaar ahaan dumarka. Sida cilmi-baadhistu sheegtay, sida ugu fudud uguna badbaado badan ee lagaga badbaadi karo cudurkan xanuunka badan waa ka hortagga caabuqa iyo cabbitaanka hal litir oo biyo ka badan intii caadiga ahayd waxay ka hortagtaa cudurkan. Marka loo eego cilmi-baaris, haweenku waxay leeyihiin khatar badan oo cudurkan ah marka loo eego ragga, laakiin ragga waa inay sidoo kale taxaddaraan. Waxa uu sheegay in biyo badan oo la cabo ay sahal u tahay in laga takhaluso bakteeriyada ku uruurta kaadiheysta oo aysan isku uruurin taas oo keenta cudurka.
Isticmaal dhar adag
Isticmaalka joogtada ah ee dharka cidhiidhiga ah waxay keeni kartaa cudurro xanuun badan sida caabuq ama caabuq ku dhaca marinka kaadi mareenka, isticmaalka dharka ayaa kordhiya khatarta caabuqa kaadi mareenka.
Shaqooyinka qaar ha ahaato mid raqiis ah ama sabab kastaba ha ahaatee, qof kasta oo inaga mid ah waa qof kaadida iska daaya, wax xunna ma aha laakiin in aynu in badan ku dhaqaaqno mooyaane ama aynu caado u yeelano. Haddii caado noocaas ah la sameeyo, waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin aad u daran. Haddii sidaas la sameeyo waxay kordhisaa koritaanka bakteeriyada waxyeelada leh, taas oo iyaduna kordhisa khatarta caabuqa kaadi mareenka.
Waxaa jira habab gaar ah oo khamiirka (VCUG) lagu cabbiro cadaadiska gudaha kaadiheysta iyo kaadi mareenka inta lagu jiro kaadida taasoo tusin doonta iyadoo la isticmaalayo raajo waxa dhaca marka dhallaankaaga kaadiyo.
Habdhiska kaadida (haweenka)
VCUG waxay u taagan tahay “ballaarinta cysto-retrogram”) oo macneheedu yahay kaadida. “Cysto” waxaa loogu talagalay kaadiheysta. “Urethro” waxaa loogu talagalay kaadi mareenka, tuubada kaadida ka soo saarta kaadiheysta. “Gram” macnaheedu waa sawir. Sidaa darteed, VCUG waa sawirka kaadida ee kaadida ee kaadiheysta ee kaadi mareenka.
Tijaabadu waxay isticmaashaa nooc gaar ah oo qoyaan ah oo loo yaqaan dhexdhexaad dhexdhexaad ah si ay si fiican uga muuqato kaadida raajada.
U diyaari ilmahaaga imtixaanka
Waqti sii si aad u akhrido macluumaadkan si taxadar leh oo u sharax ilmahaaga. Carruurta garanaya waxa la filayo ayay u badan tahay inay werwerku ku yar yihiin. U sheeg ilmahaaga imtixaanka erayada ay fahmeen, oo ay la socdaan erayada qoyskaagu isticmaalo si ay u fahmaan sida jidhku u shaqeeyo.
Iyadoo qayb ka ah baaritaanka, tuubo yar oo la yiraahdo kateeter ayaa la gelin doonaa kaadi mareenka ilmahaaga. Waxay noqon doontaa xanuun in la geliyo kateetarka. Laakiin haddii ilmahaagu is dejiyo, waxay noqon doontaa mid raaxo leh in la xidho. Waxaad ku bari kartaa ilmahaaga inuu is dejiyo adiga oo si qoto dheer u neefsanaya. Weydii cunugaada inuu koobiyo shamac dhalasho, buufin buufiyo ama sii daayo xumbo. Ku samee jimicsiga neefsashada guriga ka hor intaadan imaan isbitaalka.
Dhalinyaradu waxay mararka qaarkood keenaan shay raaxo leh oo ay ku qabtaan inta lagu jiro imtixaanada. Ilmahaagu wuxuu ka soo qaadan karaa guriga suuf ama buste.
Mid ka mid ah waalidiinta ayaa la joogi kara ilmaha wakhti kasta inta lagu jiro imtixaanka. Haddii aad uur leedahay, waxaad joogi kartaa qolka ilaa kateetarka la geliyo. Laakiin waa inaad qolka ka baxdaa inta lagu jiro raajada ilmaha.
Waxaad u baahan tahay inaad u sheegto ilmahaaga in takhtarka ama tignoolajiyada ay taaban karaan xubnihiisa gaarka ah si ay u nadiifiyaan ugana xiraan tuubooyinka. U sheeg ilmahaaga inaad u ogolaatay inay taabtaan sababtoo ah imtixaanku wuu ku caawinayaa.
Tijaabada waxa samayn doona laba farsamayaqaan
Tignoolajiyada casriga ah waxay ku takhasusaan beeraleyda tuubada iyo raajada. Mararka qaarkood takhtar ku takhasusay shucaaca waa inuu ku jiraa qolka inta lagu jiro baaritaanka. Raajo-yaqaanka ayaa akhriya raajada.
Habdhiska kaadida (lab)
Tignoolajiyada raajada ayaa u diyaarin doona ilmahaaga baaritaanka isaga oo u sheegaya waxa dhici doona wakhtigaas. Raajo-yaqaanka ayaa nadiifin doona meesha uu guska ama kaadi mareenka ilmahaagu tago. Farsamo-yaqaanku wuxuu markaas gelin doonaa tuubada dabacsan meel bannaan. Kateeterku waa tuubo dheer, dhuuban, jilicsan, siman oo dhex mara kaadi mareenka kaadiheysta. Tignoolajiyada ayaa tan u sharxi doona mar kasta, sida ay sameeyaan.
Haddii ilmahaagu qabo xaalad wadnaha ah
Waxa laga yaabaa in ilmahaagu u baahdo inuu qaato antibiyootik ka hor inta aanu wax baadhitaan ah samayn. Tusaale ahaan, carruurta wadne xanuunka qaba waxay u baahan yihiin inay qaataan antibiyootiga ka hor intaysan tagin dhakhtarka ilkaha. Antibiyootiggu waa daawo disha caabuqa. Haddii ilmahaagu u baahan yahay dawadan, fadlan u sheeg dhakhtarka kuu qoraya VCUG ilmahaaga. Dhakhtarku wuxuu heli doonaa dawadan ka hor inta uusan ilmahaaga siin VCUG.
VCUG-yada waxaa badanaa lagu sameeyaa isbitaal
Cadaadiska ku jira kaadiheysta iyo kaadi mareenka inta lagu jiro kaadida waxaa ogaanaya Waaxda Sawirka ogaanshaha. Inta badan waxaa loo yaqaan waaxda raajada. Haddii aanad garanayn meesha ay ku taal waaxdan, ka ogow soo dhawaynta weyn.
Kormeerkan waxa uu qaadanayaa 20 ilaa 30 daqiiqo. Baaritaanka ka dib waa inaad meeshan joogtaa ilaa 15 daqiiqo ilaa sawir-gacmeedyadu diyaar yihiin.
Inta lagu jiro imtixaanka
Markaad gasho Waaxda Sawir-qaadista, ilmahaaga waxa la dhigayaa hal qol oo beddela, oo xidhan marada cisbitaalka. Kadib dhallaankaaga waxa la geynayaa qolka raajada. Hal waalid oo keliya ayaa awoodi doona inuu raaco ilmaha.
Marka adiga iyo ilmahaaga aad ku jirtaan qolka raajada, tignoolajiyada ayaa ku weydiin doona inaad iska siibto xafaayadda nigiga ee ilmahaaga. Kadibna ilmahaagu wuxuu ku jiifsan doonaa miiska raajada. Faashad ilaalin ah ayaa lagu mari karaa caloosha ama lugaha ilmahaaga si loo hubiyo in ilmahaagu badbaado.
Kamarada miiska saaran ayaa sawiri doonta. Tignoolajiyada ayaa isticmaali doona shaashad telefishan si uu u eego waxa dhacaya inta lagu jiro baaritaanka.
Marka farsamayaqaanku samaynayo raajada, ilmahaagu wuxuu u baahan yahay inuu ahaado sida ugu macquulsan si uu u helo natiijooyinka ugu fiican. Gacmaha ilmahaaga ayaad wax yar ku qaban kartaa ilaa laabtaada si aad uga jeediso ilmaha dhinac kasta. Tusaale ahaan, waxaad ku heesi kartaa gabay ama hees.
Kateetarka ku habboon
Tignoolajiyada raajada ayaa ku bilaabi doonta baaritaanka isaga oo nadiifinaya meelaha qarsoon ee ilmahaaga oo gelinaya tuubo. Kateetarka ayaa iskii u faaruqi doonta kaadiheysta.
Kateetarka ayaa markaa lagu dhejin doonaa dhalo leh dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Kala duwanaanshuhu wuxuu ku qulquli doonaa tuubada dhexdhexaadka ah ee kaadiheysta. Tani waxay u ogolaanaysaa tignoolajiyada inuu si fiican ugu kuurgalo gudaha kaadiheysta iyo kaadi mareenka. Ilmahaagu wuxuu awoodi doonaa inuu dareemo kala duwanaanshiyaha marka uu sii marayo kaadiheysta. Waxaa laga yaabaa inay dareemto qabow laakiin ma dhaawacayso.
Farsamo-yaqaanka raajada ayaa qaadi doona xoogaa raajooyin ah marka dhexdhexaadka ka soo horjeeda uu ku qulqulayo gudaha kaadiheysta. Marka kaadiheysta ilmahaagu buuxsamo, ilmahaaga waxaa la waydiin doonaa inuu ku kaadiyo digsiga sariirta ama xafaayadda. Kateetarka ayaa si fudud u soo bixi doonta isla marka ilmahaagu kaadiyo. Tignoolajiyada ayaa qaadi doona xoogaa raajo ah inta ilmahaagu kaadinayo. Kuwani waa sawirada ugu muhiimsan ee imtixaanka.
Imtixaanka ka dib
Tignoolajiyada raajada ayaa kuu sheegi doona sida loo tago qolka beddelka si ilmuhu u xidho dharkiisa. Markaa waxaad fadhiisanaysaa qolka sugitaanka. Kadib markaad hubiso sawirada raajada, tignoolajiyada ayaa kuu sheegi doona goorta aad tagi karto.
Haddii aad ballan ku leedahay rugta caafimaadka si aad u aragto dhakhtar baaritaanka ka dib, u sheeg tignoolajiyada. Waxay hubin doonaan in natiijadaada loo diro rugta caafimaadka. Haddi aanad dhakhtar la kulmin baadhista ka dib, natiijooyinka waxa loo diri doona dhakhtarka ilmahaaga todobaad gudihiis.
Sii ilmahaaga cabitaanno badan guriga
Waqti ka dib baaritaanka, cunugaada waxaa laga yaabaa inuu dareemo xoogaa raaxo ah, sida dareen gubasho marka uu kaadinayo. Sii cunugaada cabitaano badan oo uu cabbo maalinta ama labada maalin ee xigta, sida biyaha ama casiirka tufaaxa. Cabitaanka khamriga waxay caawin doontaa ilmahaaga haddii ay wax dhibaato ah la kulmaan.
Haddii aad qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan saamaynta QuoteTest, fadlan ka hubi Tignoolajiyada. Haddii ilmahaagu aanu nasanayn in ka badan 24 saacadood, wac dhakhtarkaaga qoyska.
(VCUG) waa tijaabo adeegsata raajo si loo ogaado waxa dhacaya marka ilmahaagu kaadinayo.
Inta lagu jiro baaritaanka, ilmaha waxaa la gelin doonaa kaadi mareenka kaadida.
Baaritaanku wuxuu noqon karaa xanuun. Waxaad cunugaada ku heli kartaa inuu ku nasto guriga inta ugu badan ee suurtogalka ah baaritaanka ka hor, sida jimicsiga nasashada. Waxaad kala xidhiidhi kartaa Noor Health Life iimayl iyo WhatsApp wixii su’aalo iyo jawaabo dheeraad ah. noormedlife@gmail.com